अभिमत: पत्रकारलाई जागिर कि तलब ?
पत्रकारलाई जागिर कि तलब ?
एकजना बेरोजगार युवक जागिर खोज्दै काठमाडौंको एक सञ्चारगृहको ढोकामा पुगे । कार्यकक्षमा पत्रिकाका सम्पादक÷प्रकाशक भेटिए । युवकले सम्पादकसंग आफूलाई पत्रिकामा ‘पत्रकार’ भएर काम गर्न मन भएको र जागिर खाने इच्छा व्यक्त गरे । दुवै जनाको एकैछिनको भलाकुसारीपछि सम्पादक ती व्यक्तिलाई जागिर दिन सहमत भए । सम्पादकले ती युवकको बेरोजगारीको फाइदा उठाए । युवकले पनि ‘जागिर’ पाएपछि थप कुरो सोंच्दै सोंचेनन् । जागिर गरिसकेपछि पक्कै तलब पाईन्छ भन्ने युवकलाई लाग्यो । काम गर्दै गए । सम्पादकले जे जे भन्छन्, त्यही गरे । जता जा भन्छन् त्यतै गए । जे लेख्न भन्छन् त्यही लेखे । लेखेका कुरा पत्रिकामा छापिदै गयो । युवक मख्ख परे । सम्पादकले जागिर मात्रै होइन, स्यावासी समेत दिए ।
एउटा बेरोजगार युवक रोजगारी पाएकै कारणले गदगद थियो । घरपरिवार,इष्टमित्र, साथीभाई उ ‘पत्रकार’ बनेकोमा गर्व गर्न थाले । पत्रिकामा उसको नाममा ‘वाइलाइन समाचार’ आयो । उसको खुशीको सिमै रहेन । दिन वित्यो । महिना वित्यो । सधै स्यावासीले मात्रै दिन चल्दो रहेनछ । पत्रिकामा आएको वाइलाइन समाचारले भोको पेट भरिंदो रहेनछ । सम्पादकले तलब दिने लक्षणै देखाएनन् । पछि वाध्य भएर बेरोजगार युवकबाट पत्रकार भएका उनले सम्पादकसंग दुःखको भारी विसाउँदै भने,‘ सम्पादकज्यू, पैसा चाहिएको थियो । घरमा साह्रै समस्या छ ।’ आफै प्रकाशक भएको पत्रिका छाप्न सम्पादकलाई धौ धौ थियो । तनाव वेग्लै थियो । अनि सम्पादकले जवाफ फर्काए,‘ तपाईलाई मैले पत्रकारको जागिर दिएको हो । मैले जागिर र तलब दुवै दिन सक्दिन महोदय ।’ पत्रकारलाई पिरलो प¥यो । सम्पादकले दिएको यो जवाफले अब पत्रकारलाई यो पत्रकारिता पेशा ‘नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ त कान्छा बाउको अनुहार’ भनेझैं लाग्यो ।
यो घटना काल्पनिक होइन । दुई महिनाअघि सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ’ भन्ने सन्दर्भमा ललितपुरमा जाइकाको सहयोगमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्ष एवम् पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष समेत भईसकेका सुरेश आचार्य पनि थिए । काठमाडौंमा एकजना सम्पादकसंग पत्रकारले पारिश्रमिक माग्दा ‘पत्रकारलाई जागिर र तलब दुवै दिन सकिन्न’ भनि सम्पादकले भनेको यही सन्दर्भलाई आचार्यले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।
देशभर अहिले बग्रेल्ती खुलेका सञ्चारमाध्यमहरुमा ‘जागिर’ खाने सञ्चारकर्मीहरुको भीड छ । सम्वाददातादेखि सम्पादकसम्म भनेकै पदमा छानीछानी पद दिने सञ्चारमाध्यमहरुको कमी छैन । सञ्चारमाध्यमप्रतिको आकर्षण व्यावसायीदेखि राजनीतिज्ञ हुँदै सामाजिक कार्यकर्तासम्मकालाई छ । पैसा भईभई ‘रहर पत्रकारिता’ गर्नेहरुका लागि सञ्चारमाध्यमबाट पारिश्रमिक पाए पनि नपाए पनि कुनै मतलब हुने कुरै भएन । तर समाचार लेखेकै भरमा जिन्दगी गुजार्नेहरुका लागि भने यो पेशा अभिषाप बन्दै गएको छ । धेरैलाई सत्य तितो लाग्न सक्छ । सञ्चारकर्मी भएर मात्रै बाँच्न अबको समयमा गाह्रो भईसकेको अवस्था हो ।
सधैं काँचको पर्दाअगाडि ‘हामी निरन्तर न्यूजमा छौं.....’ भन्ने काठमाडौंको एक टेलिभिजन च्यानलका सञ्चारकर्मीहरु पछिल्लो समयमा ‘ हामी तलबका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छौं......’ भन्न वाध्य छन् । अन्ततः टेलिभिजन प्रशासनले सञ्चारकर्मीहरुको माग पुरा गर्न नसकेपछि टेलिभिजनलाई प्राण भन्दा प्यारो ठानि वर्षौदेखि गुणगान गाइरहेकाहरु एकाएक पाखा लागे । कतिलाई त टेलिभिजन प्रशासनले पनि भन्दो हो,–‘हाम्रो काम जागिर दिने हो । तलब दिने होइन ।’
भनिन्छ, पत्रकारिता पेशा सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि हो । यसैले हत्तपत्त यसका विकृतिहरु बाहिर आउँदैनन् । तलब र पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमका विषयमा सञ्चारकर्मीहरु त्यति उग्र हुन सक्दैनन् । सकेसम्म ‘घरभित्रको कुरो घरभित्रै’ भनेझैं आफू समस्यामा परेको विषय गुम्स्याएरै राख्न चाहन्छन् । किनभने आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वसंग भागेर व्यवस्थापनसंग नराम्रो हुने चाहना अधिकांश सञ्चारकर्मीहरुको नभएरै होला । तर यसको फाइदा अदृष्य रुपमा मिडिया संचालकले लिइराखेका छन् ।
२०३५ सालमा पत्रकारिता पेशालाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाएर हिँडेका एक पत्रकार पछि आएर नारायणगढमा पुस्तक व्यवसायी बनेर चिनिएका छन् । ‘त्यतिबेलाको पारिश्रमिकले मेरो घरमा अभाव थिएन । विस्तारै पत्रकारितामा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि पुस्तक पसल सञ्चालन गरेको बताउने उनीसंग कुनै बेला ५ हजार प्रतिसम्म एकै दिन साप्ताहिक पत्रिका बेचेको अनुभव छ । बिडम्बना, यति धेरै परिणाममा विक्री हुने साप्ताहिक पत्रिकाहरुको उपस्थिति भने बजारमा अहिले कतै देखिंदैन । नारायणगढको पुलचोकमा पत्रिका बेचेर मात्रै घरपरिवारको जीविका सन्तोषजनक ढंगले चलाएका एक व्यवसायी पत्रिका व्यवसायबाट जीवन धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि अहिले ‘तास पसल’ खोलेर बसेका छन् । यी दुवै व्यवसायीको अनुभवमा उतिबेला पत्रकारितामा देखिने धेरै अनुहार अहिले पत्रकारितामा छैनन् । भएकाले पनि पत्रकारितालाई ‘सम्मानजनक सहभागिता’ को लोभका लागि मात्रै उपयोग गरिरहेका छन् । ‘पाका पत्रकार’को अनुभवमा कुनैबेला पत्रकारितालाई समस्याग्रस्त भनिएपनि सम्मानजनक चाहि थियो । तर यतिबेला उनीहरुकै अनुभवमा यो पेशा न सम्मानजनक बन्न सकेको छ, न त आर्थिक रुपमा नै अगाडि बढ्न सकेको छ ।
पछिल्लो दश वर्ष यता नेपाली मिडियामा आश्चर्यजनक भीड बढ्यो । जसलाई नेपाली समाज र नेपालको मिडिया व्यवसायले थेग्न सकेन । हुँदा हुँदा अधिकांश मिडियामा बोल्ने सुनाउने, हेर्ने देखाउने, र लेख्ने पढाउने पात्रहरु एउटै भए । जुन रेडियोले बोल्यो, उही रेडियोकाले मात्रै सुन्ने भए । जुन टेलिभिजनले प्रसारण ग¥यो, उसैका मान्छेले मात्रै हेर्ने भए । जे पत्रिकामा छापियो, उसैका परिवारले मात्रै पढ्ने भए । मिडिया र मिडियाकर्मी नयाँ जन्मिएपनि उसले नयाँ पाठक, श्रोता र दर्शक जन्माउन सकेन । जसको परिणाम समग्र मिडिया व्यवसायलाई नै धक्का लाग्यो र अहिले आएर समग्र सञ्चारकर्मी समेत आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । भनिन्छ, ‘अकबरी सुनलाई कसी लाउन पर्दैन ।’ राम्रा मिडिया बनाउन सके पत्रिकाका ग्राहकलाई,‘पत्रिका मागेर होइन, किनेर पढ है’ भन्दै अर्ती दिन आवश्यक छैन । यसैले आफू संलग्न मिडियालाई आफू छइञ्जेल कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नु आम सञ्चारकर्मीको दायित्व पनि हो ।
अझै पनि पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन दर्ता गर्न नेपालमा समस्या छैन । अति नै न्यूनतम शुल्कमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सकिन्छ । तर यसको ‘अपरेटिङ खर्च’ को हेक्का नहुँदा र यसप्रति गहन चिन्तन नगर्नाले धेरैलाई अन्यौलमा पारिदिएको छ । ‘मिडिया हाउस’ लाई नयाँ मान्छे काममा लगाउन गाह्रो छैन । मिडियामा काम गर्न पाएपछि आजका युवाहरु ‘रहर’ मै पत्रकारितामा प्रवेश गर्छन् । बढिमा दुई वर्ष जसोतसो काम गर्छन् । जब यो क्षेत्रमा केहि देख्दैनन्, अनि भाग्छन् । फेरि अर्को समूह उसैगरि पत्रकारितामा प्रवेश गर्छ । उनीहरुको पनि हविगत उही हुन्छ । यति भएपछि मिडिया मालिकहरुले पनि ‘यूज एण्ड थ्रो’ गर्न पाइहाले । श्रमजीवि पत्रकारका नाममा भजन गाउनेहरुलाई यस्ता कुरामा के मतलब ?
यसो भन्दैमा नेपाली पत्रकारितामा समस्या मात्रै होइन, समाधान पनि छ । भएका सञ्चारमाध्यम जोगाउने र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकालाई टिकाउन ‘मिडिया संचालक’ ले अब वर्षदिन भरि आफ्नो मिडिया सञ्चालनको आधार प्रष्ट गर्न सक्नप¥यो । अब ‘आसे विज्ञापन’का भरमा मात्रै मिडिया चलाउनेका दैलामा श्रमजीवि पत्रकारले शुरुमै पाइला टेक्न हुँदैन । शुरुमै बुद्धि पु¥याइयो भने पछि दुःख पाइदैन । पत्रकारिता पढेर यसैमा जीवन समर्पित गर्छु भन्दै लागेका युवाहरु पनि छन् अहिले । विगतबाट पाठ सिक्दै उनीहरुको भावनामा ठेस पु¥याउन नदिन अब ‘पाका पत्रकार’ ले सोंच्नैपर्ने भएको छ । यससंगै नेपाली समाजले कति मिडिया थेग्न सक्छ भन्ने हिसाब गरेर मात्रै मिडिया सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । दर्ता भई सञ्चालनमा आइसकेका मिडियालाई सोझै बन्द गर्नुभन्दा ‘मिडिया मर्ज’ को नीति ल्याएर यसलाई टिकाउन सकिन्छ । अहिले संकटग्रस्त भएका सहकारी र बैंकहरुलाई सरकारले मर्ज गरेर सञ्चालन अनुमति दिएजस्तै नेपाली मिडियामा पनि यो ‘मर्ज नीति’ ल्याउन सके समस्यामा कमी आउने थियो । अनि पत्रकारले जागिर र तलब दुवै पाउने थिए । होइन भने सधैंभरि नेपाली पत्रकारहरु ‘पारिश्रमिक विनाको परिश्रम’ गर्न वाध्य भईरहने छन् । सञ्चारमाध्यम पनि ‘मूर्दामाथिको लाश’ झैं घिटिघिटि पाराले तुलसीको मोठ ढुकेर बसिरहने छन् ।
२०७० जेठ १७ गतेको चितवन पोष्टबाट
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 1:35 PM
Baburam Dhakal June 1, 2013 at 6:47 PM
Shreeram Nepal June 1, 2013 at 6:49 PM
malai yo artical upalabda garaidunu vaye aavari hunthye.nuwakot sandesh saptahikko lagi
Indira Dahal June 1, 2013 at 6:52 PM
sir sarai man paro....
Jyoti Prasad Kafle June 1, 2013 at 6:54 PM
kati mitho lekh ...............
Dipendra Mishra June 1, 2013 at 6:56 PM
khai k khai
Hari Prasad Pokhrel June 1, 2013 at 6:58 PM
Thanks to all....@Shreeram Nepal..Pls Give me Your Mail Adress...
Laxman Bhandari June 1, 2013 at 7:02 PM
sundar article ko laaghi saddhubad
Amrita Mainali June 1, 2013 at 7:04 PM
harimaya li sodhako cha na uni li maila doka dia kinaki uni bidas jada mai la girl fr..... banaar maila asu matra di uni la ahila bibaha gare r chori janamaie maila pani bibaha ga asatai cha yaha ma nice man.....................dharai ..............dharai nice
Aananda आनन्द पोखरेल June 2, 2013 at 1:27 PM
लेख पढेँ राम्रो छ । पत्रकारलाई त तलबको खाँचो छ सर जागिरले खन दिँदैन क्यारे । भोको पेटमा काम गर्न सकिदैन । "लेखको भित्रि अंश ।"